‘अब फाल्गुनन्दका ४० वटै विद्यालयमा मातृभाषामा पठन–पाठन गर्ने ब्यवस्था हुन्छ’ « Mechipost.com
‘अब फाल्गुनन्दका ४० वटै विद्यालयमा मातृभाषामा पठन–पाठन गर्ने ब्यवस्था हुन्छ’
प्रकाशित मिति: २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार १२:१८
इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री
पाँचथरमा स्थानीय तहको नामाकरण पहिचानको आधारमा भएको छ । अहिले फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा केही विषय उठिरहेको छ । भाषाको विषयमा केही विषय उठ्यो । केही साथीहरुले भाषा जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण गरेर चुनावी मसला बनाउनुभएको छ । मलाई लाग्छ अहिलेको शब्जीमा त्यो मसला लाग्दैन् । पाँचथरका जनता, फाल्गुनन्दका जनता मकैबारी फाँडेर धतुरोको खेती गर्नमा त्यत्ति धेरै विश्वास गदैनन् । त्यसैले धतुरे खेती धेरै लाग्दैन् । विषय प्रष्ट हुनुपर्छ । सामाजिक संघ संस्थाहरुले प्रेस विज्ञप्तिहरु निकाल्नुभएको छ । जसलाई मैले राम्रोसँग नियालेको छु ।
सात वटा विद्यालयमा भाषा शिक्षक नियुक्त गर्न प्रकृया अघि बढाएको थियो । हामी भाषा शिक्षाको पक्षमा छौँ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा लागू हुनुपर्छ । ‘भाषा नरहे त्यो जाति रहँदैन भनेर’ महागुरुले नै भन्नुभएको छ । हामी महागुरु फाल्गुनन्दका अनुयायी हौँ ।
जहाँसम्म सात वटा विद्यालयमा भाषा शिक्षक नियुक्त गर्ने कामलाई राजनीतिकरण गरियो । प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली विपरित विज्ञ नियुक्त गरेर जवरजस्ती विद्यालयमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्न खोज्दा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकार खोसियो, भाषा पठन–पाठन रोक्नु होइन्, अहिलेको यो शिक्षक नियुक्ती प्रकृया नियमावली विपरित छ भनेर अदालत गए । म यो क्षेत्रको प्रतिनिधि, सांसद् हुनुको नाताले के भन्न चाहन्छु भने जवरजस्ती राजनीतिकरण गरेर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ती गर्नु लगत थियो । र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले छलफलको सट्टा अदालत जानु पनि गलत थियो ।
तर जसरी आज यसलाई एउटा पार्टीलाई मुछेर राजनीतिकरण गर्न खोजिँदैछ, त्यो दुःखको कुरा छ । कानूनले ४० वर्षसम्म उमेर भएकोलाई मात्र शिक्षक नियुक्ती गर्न पाइन्छ । उहाँहरुले ४५ वर्षसम्मकोलाई नियुक्ती गर्नु भनेर पत्राचार गर्नुभो । शिक्षक नियुक्ती गर्ने अधिकार विब्यसको भएपनि उहाँहरुले विज्ञले गर्ने भनेर हस्तक्षेप गर्नुभो । र आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्ती गर्ने आदेश दिनुभयो । यो कुरा विब्यसले मानेन र अदालत गयो । तर प्रचार के गरियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र तिनका कार्यकर्ताले चाँही भाषा शिक्षा पठन–पाठनको विरुद्धमा अदालत गए भनेर प्रचार गरियो । यसमा सत्यता छैन् । अझैपनि ९ वटा विद्यालयमा भाषा शिक्षा पठन–पाठन भइरहेको छ ।
४५ वर्षसम्म उमेर भएकोलाई दिइयो भने, भोली कसैले मुद्दा लगायो भने राज्यले असुलउपर गर्छ, अर्को ठूलो दुर्घटना हुन्छ । प्रचलित ऐन, नियमावली र मापदण्ड भित्रै बसेर शिक्षक नियुक्तीको प्रकृया अघि बढाउनुस् भन्दा नमानेर जवरजस्ती भयो । अदालतले भाषाको पठन–पाठन रोक्नु भनेको पनि होइन् । सात वटा विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ती प्रकृया रोक्नु भनेको हो । नौ वटा विद्यालयमा पठन–पाठन भइरहेकै छ ।
यसकारण संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको यो सरकार मुलुक धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, बहुभाषिक हुनेछ भनेर हामीले नै लडेर ल्याएको हो । यो ब्यवस्था र यो संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले तपाईँहरुलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामीले अदालत र प्रचलित कानूनलाई सम्मान गरेर हाम्रो वर्तमान गुरुलाई अगाडी राखेर के घोषणा गर्न चाहन्छु भने पाँचथरका आठवटै स्थानीय तहका सबै विद्यालयमा अव भाषा शिक्षा सुरु गरिनेछ । यसलगत्तै फाल्गुनन्दका ४० वटै विद्यालयमा जातीय बाहुल्यताका आधारमा सबै भाषा शिक्षा सञ्चालनका लागि फाल्गुनन्द गाँउपालिकालाई प्रदेश सरकार विशेष प्याकेज प्रदान गरिनेछ, यो म तपाईँहरुको वीचमा घोषणा गर्न चाहन्छु ।
अब यति भनेपछि साथीहरुलाई धेरै खेती गर्नुपर्ने छैन् होला । इमान्दारपूर्वक मैले जे भनेको छु, मैले पाँचथरको पाँच वर्षमा नक्सा बदल्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ । आज त्यहि नक्सा बदल्ने अभियानअनुसार थुप्रै कामहरु भइरहेका छन् । मैले प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढेका छन । मैले बोलेको त्यत्ति नपुगेका छैनन् । मैले मानेको गुरुको अघि भने फाल्गुनन्दको ४० वटै विद्यालयमा प्रचलित कानूनका आधारमा भाषा शिक्षा पढाउने ब्यवस्था प्रदेश सरकारले गरिनेछ । अन्य स्थानीय तहमा समेत आपसी छलफलका आधारमा मातृभाषा शिक्षा अघि बढाइनेछ । अन्त्यमा यहाँहरु सबैमा महागुरु फाल्गुनन्दको १३५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु । आदरणिय गुरु तथा गुरु आमाप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु । सेवारो, नोगेन् । (महागुरु फाल्गुनन्दको १३५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा पाँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालिका वडा नं. ५ कुरुम्बामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आङ्बोले ब्यक्त गर्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश ।)
तलको लिङ्कमा गएर मन्त्री आङ्बोको धारणा सुन्न सक्नुहुनेछ । (भिडियोः माङ्सेबुङ टीभी)
फालेलुङमा गठबन्धनका थाम्सुहाङ र जबेगू विजयी
फिदिम । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । एउटा
फाल्गुनन्दमा गठबन्धनका आङदेम्बे र नेम्वाङ विजयी
फिदिम । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । गाउँपालिकाको
मन्त्री आङ्बोको वडामा गठबन्धनका उम्मेदवार तेश्रो, वडाध्यक्षमा एमाले विजयी
फिदिम । प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का